Nin soomaali ah oo doonayey inuu fuliyo weerar argagaxiso oo lugu dilay Australia | Somaliska
Nin soomaali ah oo doonayey inuu fuliyo weerar argagaxiso oo lugu dilay Australia
Magaaladda Melbroune ee dalka Australia ayaa ciidanka dalkaasi waxaa ay toogasho ku dilay wiil soomaali ah oo la sheegay inuu doonayey inuu fuliyo weeraro argagxiso ah, islamarkaasina dil ka geeeystay gudaha magaaladaasi.
Ninkan soomaaliga ah oo ay boolisku dileen ayaa lugu sheegay magaciisa Yaquub Khyere, waxaana uu qof dumar ku qafaashay dhismayaal ku yaala magaaladda, kaasoo markii dambe boolisku toogasho ku dileen. Sadex ka tirsan ciidanka ayaa dhaawac ka soo gaaray tacshiiradihii halkaasi la is weydaarsatay. Graham Ashton oo ah taliyaha booliska gobolka Victoria waxaa uu sheegay isagoo warfidiyeenadda la hadlaya in Kheyre uu la xirriiray telefeyshinka gobolkaasi oo u sheegay inuu ka tirsan yahay kooxda Daacish. Australia waxaa ay ka mid tahay dalalka xulufadda la ah Mareykanka ee dagaalka kula jira kooxda la baxday dowlada Islaamiga ah ee ka dagaalama Suuriya iyo Ciraaq,
Ninkan soomaaliga ah ayaa sanadkii 2009-kii ayaa dacwad loogu soo oogay ka dib markii lugu eedyey inuu maleegayey weeraro ka dhan ah xerro ciidan oo ku taala magaaladda Sydney ee dalkaasi. Ninkan ayaa markii dambe la sii daayey. Isku soo duuboo dhalinyaradda soomaalida ee dunida galbeedka ayaa qaar ka mid ahi waxaa ay u dagaalamaan urruro diimyo marin habaabsan sida al shabaab iyo Daacish.
Siyaasi ka tirsan xisbiga xag jirka ah ee SD oo dacwad lugu soo oogay aflagaado oo uu soomalida u geeystay
Weeraradii London oo ay ku dhinteen dad gaaray toddobbo ruux
Ciidanka ammaanka oo qabtay nin argagaxisanimo looga shakisan yahay